Steel spool Ukupakisha Plastic amabhali Wire - China Ningbo Judin Special Monofilament
Plastic amabhali Wire
Steel spool Ukupakisha Plastic amabhali Wire
Wooden spool Ukupakisha Plastic amabhali Wire
Plastic spool Ukupakisha Plastic amabhali Wire
eqine High Strength
Ideal ye RDF ebheyila
Ifumaneka ubude amakhulu kunye neesayizi standard
RDF, okanye inkunkuma yezibaso ethatyathwe, usebenzisa iteknoloji evelisa amandla inkunkuma ukuba akafanelekanga ukuba ri yemveli. Ingqalelo imfuneko yokuba ucingo amabhali oko kumlungele na RDF, sisungule imveliso leyo efanelekileyo amabhali inkunkuma ngeenjongo ukutshisa.
Xa ukwenziwa amabhali kunye ezweni ukuba inkunkuma eqinileyo ukutshisa, ucingo kwamabhali sentsimbi zemveli kufuneka zisuswe phambi kokuba iqale inkqubo otshisayo. Oku abasebenzi kakhulu yaye zibiza imali eninzi.
entsha JUDIN Plastic Wire yethu ngokukodwa lusekiwe kwaye yenziwa yi Judin unako kutshiswa ngexesha lenkqubo ukucudiswa ekunikezeleni ixabiso calorific.
ubukhulu: 4mm x 4mm
Length coil ngalinye: m 13000
Ubunzima imitha nganye: 0,018 kg
Isici Roll: φ 550 x 270mm
sekhefu eqine kwi enye: 5000 N
ikhefu eqine kwi esangqeni ngeqhina lomtshato: 4800 N
Zobude ngethuba lokuphumla enye: 15%
Zobude kwi zahlukane ngeqhina lomtshato: 9%
Amabhali inokufakwa ukuba amaziko isongiwe ngokupheleleyo ngaphandle ngoncedo apho uya kuyisindisa ngokubonakalayo ixesha nemali ngokuphucula inkqubo processing.
Olunikwe 13000 ekwazi imitha, zalishumi kg 235 kuphela, nto leyo ilingana nama-750 kg ngocingo. Ngoko zifakwa kwi RDF / SRF Baler kunye nesakhelo kobunikazi feed (ezifumaneka ku-odola) nokuphathwa kunye nolondolozo yabasebenzi athathiweyo ukutshintshiselana ekwazi yehliswe kakhulu, nto leyo luncedo operatives.
Reel nganye ziya kuvelisa 2800 amabhali (ezisekelwe ubukhulu bale we 1.2m X 1m X 1m) kwaye uya konga imali ebonakalayo ixesha operatives. I Judin Plastic Wire unalo ubunzima elingana uqhekeke ukuya steel wire eqine ephantsi kwaye uzinzile / okomeleleyo ukusetyenziswa.
Ukusetyenziswa JUDIN Plastic Wire negates ngoku izohlwayo eyabekwa uninzi kwesitovu EU ukubuyisa steel wire ukusuka kwiziko labo, ukuza kuthi ga ngoku ukuvelisa imali iindleko.
Abaxhasi basebenzisa JUDIN Plastic Wire izakuvula iindawo ngakumbi / amathuba ukuze ubekeko izinto zabo.
Previous: Wooden spool Ukupakisha Plastic amabhali Wire
4 * 4 amabhali Wire
4 * 4 Plastic amabhali Wire
4x4 amabhali Wire
4x4 Plastic amabhali Wire
Environmental amabhali Wire
Lula 10 Kum Square amabhali Wire
Lula Lindex Plastic amabhali Wire
nezinto Macpress Plastic amabhali Wire
nezinto Metal spool amabhali Wire
nezinto PET amabhali Wire
nezinto PET Square amabhali Wire
Lula Presona Plastic amabhali Wire
Lula Sacria Machines Plastic amabhali Wire
nezinto UnoTech Plastic amabhali Wire
nezinto Whitham Mills Plastic amabhali ucingo
Metal spool amabhali Wire
Recycle amabhali Wire
Recycle Plastic amabhali Wire
Ukuvuselela amabhali Wire
Recycling Plastic amabhali ucingo
Yinyaniso: +86 574 28829858
Idilesi: # 3 Ind & Td Road, Jishigang Industrial Park, kwisiThili Yinzhou, Ningbo, 315171, PR China